Wadahadalku wuxuu noqday mid rogrogmi kara oo xoogaa hadal qaadis ah ayaa ku saabsan bixinta khidmadaha horumarinta toddobaadlaha ah iyadoo aan wax horumar ah laga arkin horumariyeha ay la shaqeynayeen Haatan horumariyaha ayaa doonaya inuu iyaga ka qaado lacag kale oo lacag ah si ay u dhamaystiraan mashruuca iyo sidoo kale ujrada dayactirka toddobaadlaha ah si ay u daboosho codsiyada kale. Way ka sii xumaaneysaa.
Nasiib wanaagse, haweeneyda aan la shaqeynayo waxay dalbatay marin u helid maamul waqtigii la soo dhaafay si ay wax uga beddesho qaar ka mid ah feylasha qoraalka barta. Horumariyaha ayaa laga yaabaa inuu siiyo marinkeeda kooban laakiin isagu ma uusan bixin. Isaga (caajis) wuxuu siiyay iyada soo galitaanka maamulka ee goobta. Caawa waxaan u adeegsaday marin u helida kaydinta dhammaan koodhka goobta. Waxaan sidoo kale gartay waxa software-ka maareynta ah ee uu adeegsanayo waxaanan ku aaday dhanka maamulka keydka macluumaadka halkaas oo aan awood u yeeshay inaan u dhoofiyo labada codsi ee xogta iyo qaabdhismeedka miiska. Whew.
Mulkiilaha ayaa qorsheynayay u wareejinta boggaga magacyada cusub ee magac marka la soo gabagabeeyo horumarka. Taasi way weyn tahay sababta oo ah waxay la macno tahay in aagagga hadda jira ay dhici karaan haddii ay dhacdo in ay jirto kala fogaansho xanaaq ah oo u dhexeeya horumariye iyo shirkadda. Hore ayaan u arkay tan oo kale.
Ku qor magacyadaada magacaaga magaca shirkaddaada. Ma xuma in horumariyahaagu noqdo Xiriir Farsamo ee koontada, laakiin marna u wareejinta lahaanshaha bogga cid kasta oo ka baxsan shirkaddaada.
Way fiicantahay in soo-saarahaagu uu yeelan karo shirkad martigelin ah oo uu ku martigelin karo boggaaga adiga, laakiin ha sameynin. Taabadalkeed, weydii talooyinkiisa halka lagu qabanayo arjiga. Waa run in horumariyayaashu ay bartaan softiweerka maareynta, noocyada, iyo meesha ay ku yaalliin kheyraadka taasna waxay kaa caawin kartaa in badeecadaada si dhakhso leh loo dhammaystiro. Taasi waxay tiri, in kastoo, aad leedahay koontada martigelinta oo aad ku darto horumariyahaaga marin u gaar ah iyo marin u helitaankiisa. Sidan, waad jiidi kartaa furka markasta oo aad u baahato.
Ha u maleynin inaad adigu furaha leedahay, qoraal ku qor. Haddii aadan dooneynin horumariyahaagu inuu adeegsado xalka aad isaga / iyada ku siisay inuu ku horumariyo meel kale, waa inaad go'aansataa taas waqtiga heshiiska. Xal baan u soo saaray habkan laakiin sidoo kale waan soo saaray halkaan ku haysto xuquuqda koodhka. Xaaladda dambe, waxaan kala xaajooday kharashka dalabka mid ka hooseeya si ay jirto dhiirrigelin ay shirkadda i siiso xuquuq. Haddii aadan dhib ka qabin soo-saarahaaga inuu adeegsanayo lambarkaaga meel kale, markaa waa inaadan bixinaynin lacagta ugu sarreysa!
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah inaad bixinayso hibada horumariyahaaga laakiin waa inaad ilaalisaa xakamaynta iyo lahaanshaha fikradda. Adigaa iska leh. Adiga ayaa maalgashaday, adigu waxaad halis u galisay ganacsigaaga iyo faa iidada aad u leedahay you waana adiga waa inaad ilaashataa. Soo-saareyaasha waa la beddeli karaa taasina waa inaanay waligood khatar gelinin dalabkaaga, ama uga sii darneyn - ganacsigaaga.